Duqeymo Khasaaro dhaliyey oo Ka dhacay Waqooyiga Muqdisho – Puntland Voice
March 22, 2010 2:19 pm Views: 19
Galabnimadi maanta waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay duqeymo xoogan oo dhaliyey khasaaro isugu jirta dhimasho iyo dhaawac. Duqeymahaan ayaa waxaa ay ka dhaceen Waqooyiga magaaladaasi gaar ahaan xaafadaha lagu kala magacaabo Yaqshiid,C/casiis,Shibiis iyo Kaaran.
Saraakiisha Caafimaadka oo aan xirriro kala duwan la samaynay ayaa inoo xaqiijiyey in ay ku geeriyoodan ila 3-qof oo rayid ah ayna ku dhaawacmeen ku dhowaad 10-qof oo iyagu deganaa xaafadaha ay duqeymahaan ku dhacaayeen.
Waxaana dadki dhaawacmay loola cararay xarumaha Caafimaadka oo lagu dabiibayo dhaawacyada soo gaaray oo isugu jira kuwa fudud iyo culus. Lama yaqaano ila iyo hada duqeymahaas cida geysatay oo ka dambeysay,waxaana aan jirin cid ka hadashay oo ka tirsan Dowlada iyo Xoogaga Mucaaradka isku haysta Magaalada Muqdisho.